» बोल माया जस्तै उत्कृष्ट प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’, ‘बोल माया–२’ मा के होला ? (भिडियो समिक्षा)
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:५९
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १६ जेठ । सन् २०१८ को मे १७ तारिखमा चर्चित गायक तथा मोडल प्रकाश सपुतको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट एउटा गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरियो जुन भिडियोले नेपाली साँगितिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ उचाई प्राप्त गर्यो । ‘दोहोरी ब्याटल’ गाएर नेपाली युवाको मनमा बस्न सफल भइसकेका प्रकाशलाई यो गीतले सबैको प्यारो बनाईदियो । उनको कारुणिक गीत ‘बोल माया’ को म्यूजिक भिडियो कयौँ दिनसम्म युट्युबमा नम्बर १ ट्रेण्डिङमा कब्जा जमाएर बस्यो । उनको गीतले जस्तोसुकै कठोर मानिसलाई पनि पटक–पटक रुन बाध्य बनायो । गीतसँगै उत्कृष्ट बनेको भिडियोका हरेक दृश्यहरु एकपटक मात्र भिडियो हेरेका जोकोही दर्शकको आँखावरिपरि अहिले पनि घुमिरहेकै होला ।
गीतको संगीत र शब्दलाई गायक तथा मोडल प्रकाश सपूतले जति मार्मिक बनाएका थिए त्यसलाई अन्याय नहुने गरि शब्दलाई दृश्यमा भिजाउने अनि दर्शकको आँखा रुझाउने गरि भिडियो तयार पारेका थिए । उनीसहित नारायण रायमाझी र शान्ति श्री परियारको आवाज समावेश गीतको म्युजिक भिडियोमा उनको श्रीमतीको भूमिकामा अञ्जली अधिकारीले जीवन्त अभिनय गरेकी छिन् । बाध्यतामा कमाउन भनि विदेश गएका श्रीमान गुमाउनुको पिडा, धर्ती नटेकेको गर्भको निर्दोष शिशुले बुवाको मुख हेर्न नपाएका कारुणिक दृश्यलाई करन चैँसिरले क्यामेरामा कैद गरेका छन् । प्रकाशकै निर्देशनमा बनेको म्यूजिक भिडियोमा सितारे गन्धर्व तथा बालकलाकार डिपलभ वि.क. र खुशी थापाले रमाईलो अभिनय गरेका छन् । बोल मायालाई अहिलेसम्म १ करोड ९१ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
उनै गायक तथा मोडल प्रकाशकै ‘बोल माया’ टिमले अहिले अर्को नयाँ गीत बजारमा ल्याएको छ, जसलाई दर्शकहरुले ‘बोल माया’ जत्तिकै मन पराएका छन् । उनको कला र गलाको खुलेर प्रशंसा भएको छ । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा ‘गलबन्दी’ लाई उनको युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको ३ दिन मात्र भएको छ अनि अहिले नै यस गीतको म्युजिक भिडियोलाई २२ लाख ६३ हजारभन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ । यो भिडियो अहिले युट्युब ट्रेण्डिङको दोस्रो नम्बरमा छ । एक लाख ७ हजार लाईक गीतले पाईसकेको छ । गीतको म्युजिक भिडियोले फेरि एकपटक ‘बोल माया’ को कारुणिक दृश्यलाई सम्झाउँछ अनि सुरुमै भावुक बनाउँछ । ‘बोल माया’ कै कथाबाट सुरु हुन्छ म्युजिक भिडियो । ‘बोल माया’ को कथामा गर्भमै छोडेर गएको प्रकाशको सन्तान अहिले साथीहरुसँग दौडने भईसकेको छ । जवान छोरालाई परदेशमा गुमाएका हजुरबा र हजुरआमा आफ्नै दिनचर्यामा लागिसकेका छन् अनि प्रकाशका भाई पनि घरकै काममा ब्यस्त छन् । साथीसँग खेलेर आएको उक्त अभागी नायकको छोरा, हजुरआमाले आमालाई खाजा पठाउँदा बुवाको जस्तै कपालको नक्कल गर्छ । टाउकोमा रुमाल बाँधेर उ ढोकाबाट निस्कँदा स्वर्गीय बुवाको तस्बिर दैलोमाथि देखिन्छ । बोल मायामा प्रकाशको बालापनको रोल गरेका बालकलाकार डिपलब बिक नै यसमा उनको छोराको भूमिकामा छन् । हेरौँ भिडियो समिक्षा–
बालापनदेखिको प्रेम गुमाएकी उनकी आमा बारीमा काम गर्दै गरेकी देखिन्छन् । बोल मायाकी अञ्जली अधिकारी, अहिले पनि यो रोलमा उत्तिकै फिट देखिन्छन् । उनको हाउभाउबाट आफुलाई माया गर्ने श्रीमालाई गुमाउनु पर्दाको पिडा झल्किन्छ । खाजा मुखमा च्याप्दै गर्दा छोराको प्रश्नले उनलाई बिगतको पिडामा डुबाईदिन्छ । ‘आमा, बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो ?’ छोराको प्रश्न छुरा झैँ रोपिन्छ उनको मनमा । बालापनदेखिको प्रेम, विवाह, श्रीमानको परदेश यात्रा अनि फर्कँदा बाकसमा लास बनेर आएको जीवनसाथी, एकैपटक उसको मस्तिस्कमा दौडन्छ । छोराको दोस्रो पटकको प्रश्नमा पिडा मिश्रित आवाजमा उनले जवाफ दिन्छिन्–‘ठ्याक्कै तँ जस्तै हुनुहुन्थ्यो, चकचके, चुलबुले, चञ्चले अनि नक्कले ।’ भावुक मुस्कान मिश्रित आवाजमा भौतिक जीवनमा नभएका श्रीमानको वर्णन गर्दै उनी बिगतमा फर्किन्छन् । जहाँ उनका स्वर्गीय श्रीमान र उनको प्रेमिल संसार थियो ।
‘गलबन्दी च्यातियो तिमले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर, पछ्यौरी च्यातियो तिमले तानेर, फसाउन नखोज सोझी ठानेर ।’ यही बोलसँगै सुरु भएको म्युजिक भिडियोमा तपाईँ रोधीमै पुगेको अनुभव गर्नुहुन्छ । रोधीमै डुबेकी अञ्जलीलाई उनका देवरले झकझकाउँछ अनि भतिजलाई गाउँलेले लखेटेको कुरा सुनाउँछ । भिडियो क्लाईमेक्सले दर्शकलाई थप कौतुहलता जगाउँछ । चिठी छोडेर गाउँबाट भागेको बालकले आमालाई सम्बोधन गर्दै बाबाको सपना पुरा गरेर फर्कन्छु भनेर लेखेका हुन्छन् । छोरा किन भाग्यो गाउँबाट ? किन लखेटे गाउँलेले छोरालाई ? के छोरा फर्किएला ? बोल मायाको सिक्वेल ‘बोल माया २’ मा यसको जवाफ पाईन्छ भन्दै प्रकाशले भिडियो सकाएका छन् । उनले बोल माया २ आउने समाचार सुनाएर उनका दर्शकलाई थप उत्साह प्रदान गरेका छन् अनि बोल माया २ कस्तो होला भन्ने कौतुहलता पनि बढाएका छन् । बोल माया २ कस्तो होला ? यसको जवाफ पाउन भने उनको च्यानलमा सब्क्राईब गरेर पर्खनु बाहेक अन्य विकल्प छैन ।
नेपाली समाजको रोधी सँस्कृतिमा आधारित यस गीतलाई प्रकाशले बोल मायाको प्रिक्वेलको रुपमा निर्माण गरेका छन् । बोल मायामा सबैको मन जितेकी शान्ति श्री परियारको आवाज नै यसमा समावेश छ । भिडियो निर्माण र गीतको शब्द चयनलाई उनले निकै ध्यान दिएका छन् । बाँकी कुरा तपाईले भिडियोमा हेर्नसक्नुहुनेछ । गीतलाई भिडियोको अन्तिम स्थानमा र डिस्क्रीप्सनमा समेत राखिएको छ । गीतमा प्रकाशकै शब्द सँगीत छ । कृष्ण बिकको म्युजिक एरेञ्ज र ब्याकग्राउण्ड स्कोर रहेको गीतमा खर्क बुढा मगरले मादल र रत्न बिकले बाँसुरी बजाएका छन् । प्रकाशकै निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा प्रकाश, अञ्जली, डिपलवसँगै करविन गैरे लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
तपाईलाई प्रकाश सपुतको बोल माया र गल्बन्दी गीतको भिडियो कस्तो लाग्यो ? कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । भिडियो मन परेमा लाईक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला ।